Ikhabethe elincane laseColorado #3
Leli khabethe lingcono kakhulu kumbhangqwana noma abantu abadala abangu-2 kanye nezingane ezincane ezi-2. Inendawo yokuhlala engama-375 sq ft. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yekhishi eligcwele, ukunethezeka, kanye nemibono. Ilungele abahambela bodwa, abahambi bebhizinisi, imindeni (enezingane), amaqembu amakhulu, nabangane abanoboya (izilwane ezifuywayo).
Samukela kuphela izinja ezivuthiwe, eziziphethe kahle. Lokho akubandakanyi amakati. Inombolo enkulu yezinja ezimbili (2). Kunemali ehambisana nokuletha inja yakho ku-$10.00 inja ngayinye ngosuku. Sicela ufunde imithetho yethu yendlu ngaphambi kokubhukha.
Ukufika ngaphambi kwesikhathi emakhabetheni ethu akuvunyelwe ngalesi sikhathi njengoba sisebenzisa isikhathi esiphakathi kokubhuka ukuze sihlanze kahle futhi sihlanze noma amagumbi. Isikhathi sokungena ngu-3 PM, Ungafiki kusenesikhathi.
Le khabhinethi yalungiswa kabusha eminyakeni embalwa edlule yaba nephansi lepulangwe elakhiwe nge-laminate floor kulo lonke ikhabethe, amakhabethe amafindo kaphayini, usofa omusha wokulala, isiqandisi esisha kanye nezihlalo ezimangalisayo zamapulangwe kuvulandi. Umbono ovela kule khabhinethi muhle kakhulu.
Indawo yethu inokuthula futhi iphumule. Uzothola umbhede othokomele, idekhi enezihlalo ezinhle zokhuni zokutshibilika emphemeni kanye nekhishi eligcwele kanye negumbi lokugezela. Leli khabethe ligcwele izingubo zokulala, amathawula, ikhofi, i-bbq, i-cable TV ne-WIFI yamahhala.
Ngeke sikuhluphe kodwa sikhona uma usidinga. Ungasithola ku-9287518700